Darsonval ho an'ny tarehy - famantarana sy ny fanoherana, fampiasana. Apparat darsonval ho an'ny tarehy
Darsonval ho an'ny tarehy - ny tsiambaratelon'ny fikarakarana sy ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny famarotana
Ny darsonval ho an'ny tarehy dia fitaovana ho an'ny fitsaboana ara-pahasalamana noforonina tamin'ny taonjato faha-18 nataon'ny mpitsabo arifomba avy any Frantsa Arsene Darsonval. Ny tanjony voalohany dia ny fitsaboana aretina isan-karazany (migraine, arthritis, neuralgia), ary tamin'ny farany dia niditra tao amin'ny toeram-ponenan'ny cosmetologists izy.
Famaranana ny endrika - inona moa izany?
Ny foto-kevitr'ilay fitaovana "Darsonval" dia ny fiantraikany eo amin'ny hoditry ny haavon'ny hafanana. Ny fihenjanana malefaka dia mamporisika ny fanavaozana sy ny metabolika mipoitra ao amin'ny hoditra sy ny teboka lalindalina noho ny fitomboan'ny rà. Ankoatr'izay, ny famoahana herinaratra dia manimba ireo aretina ary mitondra anjara amin'ny tsiranoka miaraka amin'ny oksizenina sy ny fanesorana ranon-tsiranoka, mba hahazoana tononkalo tsara sy loko. Ny fampiroboroboana ny endriky ny tarehimarika dia manome vokatra mahagaga sy maharitra eo amin'ny aknemana, post-acne, ny kôdeksa, ny greasy na ny fahadiovana ny hoditra sy ny fahavoazana hafa.
Ao amin'ny cosmetology, dia misy karazany roa ny darsonvalization, ary samy hafa amin'ny fomba fiantraikany sy ny vokany:
Ny tsy fitovian-tsakafo tsy miankina - ny fifehezana ny hoditra dia atao amin'ny kely lavitra ny tarehiny (1-8 mm). Miaraka amin'ny fanodikodinam-panafody eo amin'ny fifehezana ny fitaovana sy ny hoditry ny tarehy, misy onja mikararana mikararana, misy ny iony ary indraindray aza ny tsindrona izay tsapan'ny marary. Amin'izany fomba izany, dia mitomany ny ratra, ny singa matevina (akn, manify), sarotra ny manasitrana ratra, manala, mandoro, hematomas. Ny fizotry ny fitsaboana amin'ny fomba tsy mifanentana dia fihaonana 10-15.
Mifandraisa amin'ny famerenana ny fanasitranana - ny vokatra dia atao amin'ny fihodinan'ny tsipika mipetaka mivantana eo amin'ny hoditra. Amin'ny alalan'io fomba io, ny fitsaboana dia miditra amin'ny latsaky ny dolara ary manampy amin'ny fanafoanana ny puhn, ny lava-bary, ny tambajotra vascular, ny karajia sy ny marika. Ny fomba fitsaboana toy izany dia 15 metatra.
Ireo paingotra efatra lehibe ho an'ny darsonval, izay manakaiky ny ankamaroan'ny andiany, dia natao ho an'ny vokatra isan-karazany:
Ny "Drop" dia ahafahanao mitarika ny areti-mando kely eo an-toerana - aken, akne, ny hain'ity ity nozzle no avo indrindra.
"Petal" - amin'ny alalan'ity menaka ity dia afaka manitsy ny faritra misy fiantraikany ianao - manomboka amin'ny teboka mankany amin'ny faritra lehibe kokoa, ny paosy dia natao ho an'ny toerana sarotra aleha.
"Fungus" - dia natao ho an'ny fitsaboana amin'ny faritra lehibe amin'ny hoditra, miaraka amin'ny fatorana azonao atao tsy vitan'ny darsonval ho an'ny tarehy, fa koa ny manasitrana ny feny, ny mason-droa mba hialan'ny cellulite.
"Comb" - ity dity ity dia natao ho an'ny hodi-doha, ampiasaina hanehoana ny fihenan'ny volo, seborea.
Fampandrenesana fanonerana - famantarana sy fanoherana
Alohan'ny hanombohana ny fitsaboana amin'ny darsonval, dia mila mahafantatra momba ireo famantarana sy ny fanoherana ny fomba fanao. Na dia malemy be aza ny ankehitriny ao amin'ny fitaovana (2-15 kV, hafahafa - 100 KHz), dia mbola fitaterana herinaratra, izay mety hampidi-doza amin'ny tranga sasany. Izany no mahatonga ireo cosmetologists hanoro hevitra fa alohan'ny handehanana voalohany ny fikarakarana voalohany ary handraisana consultation manokana. Ankoatr'izany, ny mpanao hatsikana dia tsy manoro ny fampiasana darsonval amin'ny endriny tsy an-kijanona na tsy fahampiana - ny vokatra tsara dia manome fampiharana fotsiny.
Darsonval - fijoroana vavolombelona
Ny fitaovana darsonval dia fitadiavana ireo vehivavy izay noho ny antony maromaro dia tsy te hiditra amin'ny plastika na hiditra. Ny fahasamihafan'ny olana izay manampy amin'ny famahana ny fitaovana amin'ny famerenana ny famoahana dia tena lafo. Ny fitaterana elektrôla dia manatsara ny fatran'ny rà sy ny lymph, hampiroboroboana ny fanesorana haingana ireo toxine, hanamaivanana ny hozatry ny muscle sy ny vascular, hampitombo ny fihenan'ny vina, hanamafy ny rindrin'ny kapila sy ny fanaka, hampihetsika ny fiheverana biochemika, hamerenana ny sela. Ankoatr'izany, ny darsonval ho an'ny tarehy dia misy fiantraikany amin'ny fanoherana ny atidoha, bakterizidana ary fanilikilihana.
Inona no manampy ny darsonval:
fifandonana tsy mihinan-kena;
akne, pustular elements, comedones ;
po loatra na maina;
mampihetsi-po, lozabe ny hoditra;
miteraka fifandraisana amin'ny tarehy;
ny hatsembohan'ny hoditra;
lalina nasolabia lalina;
postacne , ratra;
fananganana pore ;
Darsonval - fanoherana
Na dia eo aza ny vokatra tsara, ny fampiasana darsonval amin'ny tarehy dia miteraka fanandramana. Amin'ny tranga sasany, ny fandraràna ny fampiasana dia noho ny fisian'ny herinaratra ho an'ny olona iray, ary amin'ny hafa kosa ny tsy fitoviana dia noho ny fisian'ny fanentanana mampihena ny dingana sasany. Ny fanoherana amin'ny fehezanteny dia ny fisian'ny môle sy pigmentation eo amin'ny hoditra - amin'ity tranga ity, dia ilaina ny fanaraha-mason'ny mpitsabo iray.
Fampandrenesana ny darsonvalisation - fampiharana fampiasana:
fitondrana vohoka amin'ny fotoana rehetra;
ny ankizy hatramin'ny 6 taona;
Ny neoplasme amin'ny hoditra (malemy sy malemy), oncology;
fanehoan-kevitra mampihetsi-po amin'ny amin'izao fotoana izao na ny tsy fifandeferana;
tsy fahampian-tsakafo, fitsangatsanganana;
ny fisian'ny fanaka manakaiky ny hoditra (couperose);
Darsonval - iza no tsara kokoa?
Azonao atao ny manatanteraka famerenam-bahaolana ao amin'ny salon beauty na ao amin'ny salon, ary koa ao an-trano, ny torolalana amin'ny antsipiriany dia mifatotra amin'ny fitaovana. Azonao atao ny mividy ny fitaovana "Darsonval" ao amin'ny magazay an-tserasera na salons izay mivarotra fitaovam-pitsaboana, saingy alohan'ny handraisana azy hividy izany dia te-hizara fomba fitsaràna ao an-trano.
Ireo fitaovam-pitsaboana sahaza toy izany:
Gezatone - fitaovana frantsay eto amin'ity marika ity dia fantatra manerana izao tontolo izao;
Ultratek SD-199 dia fitaovana rosiana misy siny dimy;
Carat DE-212 - fitaovana matanjaka rosiana misy menaka efatra, ampiasaina amin'ny fikarakarana marary hoditra;
ELAD dia fitaovana fampitaovana Rosiana misy siny telo, ary tsara ho an'ny trano izy.
Darsonval - fampiharana
Ny fomban'ny fandroahana eo amin'ny cosmetologist sy ao an-trano dia tsy misy fahasamihafany lehibe:
Voalohany aloha, ny hoditra dia mila diovina amin'ny fanasana, tonerina na loto. Taorian'ny fanadiovana dia tokony maina ny hoditra.
Ny hoditry ny hoditra dia azo alefa miaraka amin'ny talk-in, ary ny maina iray - miaraka amin'ny menaka mamy misy menaka, mba hahatonga ny fitaratra ho tsara kokoa.
Alohan'ny fampiasana azy dia tsy maintsy atao amin'ny alikaola ny menaka.
Tokony hatao amin'ny fomba izay ilaina amin'ny fahasimbana rehetra ny hoditra.
Aorian'ny fitsaboana, dia afaka manosotra ny tarehanao miaraka amin'ny fanafody mampitony (alikaola-misy fiomanana tsy azo ampiasaina).
Ny fivoriana manaraka dia tokony atao androany.
Ny famonosana aorian'ny fikarakarana dia tokony hodorana amin'ny alikaola.
Darsonval from acne
Mampihatra darsonval avy amin'ny akne dia mety amin'ny karazana fifandonana isan-karazany - mety amin'ny fanafoanana acne, comedones, akne. Mandritra ny fikarakarana, dia atahorana ny fihanaky ny trondro matevina, ny hoditra dia mihinana oksizenina, ary miaraka amin'ny fanampian'ny ozon, potika ny micro microorganisms dia rava. Ho an'ny fiantraikany tsara dia azonao ampiasaina ny dipoavatra iray, izay, amin'ny hery fara-tampony azo atao, dia mila alaina avy amin'ny singa entin-tanana tsirairay. Ho an'ny fanasitranana, ny tarehy dia mampiasa lohan'ny holatra, izay entina mandritra ny 3-5 minitra.
Darsonval avy amin'ny post-piety
Tena mahomby amin'ny dity sy ny mararirary - amin'ny fanampiana azonao dia mety ho voan'ny aretin'ny hoditra aza. Ny fomba fiasa dia tokony hozatry ny famolavolana fotsy, 3-4 minitra voalohany - tsy misy fepetra, ary 3-4 minitra - amin'ny fifandraisana. Ny darsonval ho an'ny tarehy rehefa nambolena dia manatsara ny drafitry ny lymphatika sy ny fanarenana ny endriky ny hoditra, noho izany dia mihalalaka haingana kokoa ny fiterahana, ny fikolokoloana ary ny fandosirana, ary ny loko dia mahazo loko salama.
Darsonval avy amin'ny ketrona
Ny fanontaniana matetika amin'ny vehivavy dia ny fomba fampiasana darsonval avy amin'ny mimika sy ny ketrona taonany. Ny fampangatsiahana ity tranga ity dia tokony atao amin'ny holatra na ravin-tsavony amin'ny hery farafahakeliny na farafahakeliny - tokony ho hita miharihary. Ny electrode dia tokony ho entina amin'ny lamosin'ny masajo amin'ny alàlan'ny fifandraisana sy ny fomba tsy mifandray aminy mandritra ny 20 minitra. Aorian'ny fikarakarana, dia tsara ny mampihatra krèma manohitra ny fahanterana, izay ho tsara kokoa amin'ny fotoana fohy.
Darsonval tsy mitelina eo ambany maso
Ampiasao ny darsonval ao an-trano avy amin'ny fofona sy ny faribolana eo ambany maso - fomba tsara ho an'ny fomba lafo. Ny fanasitranana ny hoditra manodidina ny maso dia manatsara ny fatran'ny ra, mamono ny fihanaky ny lymph, manamaivana ranon-dra ny ra. Ny hoditra malefaka manodidina ny maso dia vita amin'ny 1 minitra amin'ny lamosina. Aorian'ny fikarakarana dia tokony hampiasainao ho an'ny hodi-maso ny mpitsabo.
Darsonval avy amin'ny couperose amin'ny tarehy
Ny algorithm amin'ny famerenana ny fampidinana miaraka amin'ny couperose dia tsy maintsy voatery hifanaraka amin'ny cosmetologist izay hanombana ny toetry ny hoditra sy ny fanaka ary mamela na mandrara ny dingana. Raha ankatoavina io fomba fitsaboana koperose io, dia tokony ho malina araka izay tratra sy ny tsy fahampian-tsakafo ny fanindrahindrana: ny lohan'ny holatra dia tokony ho raisina amin'ny fifandraisana amin'ny hoditra amin'ny fomba fifandraisana ary avy eo, amin'ny fanamafisana kely ny tsipika, amin'ny fomba tsy misy ifandraisana. Ny halavan'ny fepetra dia 5 minitra. Darsonval miaraka amin'ny couperose dia manampy amin'ny fanamafisana ny fantson-dra ary hampivoatra ny fatran'ny ra.
Lobolan'ny lobaka ao an-trano - ny fomba tsara indrindra
Ahoana ny fomba hanadiovana ny kitapo eo ambany maso, haingana sy mandrakizay?
Bodyflex amin'ny tarehy
Fanafody manerantany ho an'ny hatezerana manodidina ny maso
Hairstyle ny ampakarina ho an'ny volo lava
Kaly nandritra ny fitondrana vohoka 3 trimester - ahoana no fomba fitondrany?
Vazao amin'ny tananao ny vata
Ahoana ny fomba famokarana sira miaraka amin'ny tongolo lay?
Fananganana tulips amin'ny fararano
Mitifitra ny fitiavana ny olona
Ny tontolon'ny aterineto - inona io, inona no misy azy?
Gliatilin ho an'ny ankizy
Tatar folk costume
Famotehana ny fatoran'ny rantsantanana
Tranom-boron-damosina tsy misy fehy ho an'ny vehivavy
Fiomanana Glystonnye ho an'ny olona
Ahoana no tokony hisotroany fanasitranana tsara?